पूर्वराष्ट्रपति यादवको असोज १० गते अमेरिकामा शल्यक्रिया « Khasokhas Follow @khasokhasmag
पूर्वराष्ट्रपति यादवको असोज १० गते अमेरिकामा शल्यक्रिया
डा. रामवरण यादवको असोज १० गते अमेरिकाको मेचीगन राज्यको हेनरी फोर्ड हस्पिटल अफ युरोलोजीमा प्रोस्टेट क्यान्सरको शल्यक्रिया हुने तय भएको छ ।
त्यहाँ डा. मनी मेनानसहितको चिकित्सक टोलीले उनको शल्यक्रिया गर्ने तयारी भएको छ । उपचारका लागि उनी असोज १ गते शनिबार अमेरिका जाने र असोज ५ गते चिकित्सकसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन् । त्यसपछि उनको असोज १० गते शल्यक्रिया गरिनेछ ।
गोरखापत्रसँगको भेटमा सोमबार पूर्वराष्ट्रपति यादवले चिकित्सकहरूको सल्लाह र सुझावअनुसार नै उच्च प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्न अमेरिका जान लागेको बताए ।
यादवले भने, ‘मलाई जनताको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य प्राप्त भयो, म उपचारपछि फर्केर आएर तिनै जनताको सेवामा अझै १०–१५ वर्ष समर्पित रहनेछु । मैले ढोगेर जारी गरेको संविधान सफल भएमा देश सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
भारतको चण्डिगढस्थित नेहरू चिकित्सालयमा केही दिनअघि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रोस्टेटको क्यान्सर देखिएपछि अस्पतालका चिकित्सकले उच्च चिकित्सा प्रविधि प्रयोग गरी तत्कालै शल्यक्रिया गर्न सुझाव दिएका थिए । चिकित्सकका अनुसार शल्यक्रियापश्चात् यादवको क्यान्सर पूर्णरूपमा निको हुनेछ ।